Izwa ukuthula kuleli fulethi elizolile nelikhanyayo - I-Airbnb
Izwa ukuthula kuleli fulethi elizolile nelikhanyayo
Biarritz, Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Cyrille
Lalela ukuthula futhi uvumele ukumbozwa ukukhanya okukhona yonke indawo kuleli fulethi elihle elinomqondo wakho konke okuhamba ngezinyawo! Imizuzu emi-5 ukusuka ezitolo kanye nemizuzu eyi-15 uhamba ngezinyawo ukusuka ogwini kanye nenkundla yegalofu.
Amalayini, okugeza namathawula olwandle
I-Fiber Internet uxhumano nge-NETFLIX
3 ama-TV wesikrini esiyisicaba kanye nezidlali ze-DVD ezi-3 - ama-DVD angama-200 okuthola mahhala
I-air conditioning (igumbi lokuhlala, igumbi lokudlela namagumbi okulala)
Igalaji elineshawa nomgqomo wokugcina amabhayisikili, amabhodi okubhukuda, izikhwama zegalofu
3 ama-TV wesi…
“Indlu yezivakashi eyenzelwe ukumema abangani bakho ukuthi bazonambitha ukudla okuphanayo kwaseNingizimu-ntshonalanga.”
– Cyrille, umbungazi wakho
Igumbi lokugeza elihlangene nelokulala, I-Heated towel rack, umbhede we-queen, Umshini womoya oqandisayo
I-TV, Umatilasi oyi-Pillow-top, Umbhede omkhulu, Umshini odlala si-DVD, Umshini womoya oqandisayo
I-TV, Umbhede olala umuntu oyedwa, Umshini odlala si-DVD, Umshini womoya oqandisayo
Amasango okuphepha kwezingane
4.97 (izibuyekezo ezingu-89)
Itholakala enhliziyweni yesifunda esingokomlando sase-Saint Charles e-Biarritz, eyaziwa ngezindawo zayo ezinhle zokuhlala zemindeni kanye ne-savoir-vivre yayo, le duplex enhle yokuwela (isitezi sokuqala nesokugcina) inezindlu ezinjenge-cocoon endlini enhle egcwele abantu.
Ibanga ukusuka e- Biarritz Airport
Imizuzu engu-7 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni
Je suis responsable d’une société de cosmétiques naturels et passionné de surf.
UCyrille Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 64122171709NS
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R16710.